Indlela yokujova i-HGH-Genotropin HGH ukufundisa indlela yokwenza injection
yiHGH Thailand Februwari 07, 2018
I-Genotropin - yinto eyingqayizivele yehomoni yokukhula eThailand nakwamanye amazwe, uye wazimisela njengomgangatho olungeleyo kwaye ukhuselekileyo
Indlela yokuzimela ngokuzimeleyo i-hormone yokukhula?
Emveni koba kusebenze le HGH ipeni setha umlinganiselo oyifunayo, ungaqala ukujova
- susa isithintelo esikhuselekileyo kwiliti
- yonke into ilungele ukujova, ukujola kwenziwa ngezandla ezihlambulukileyo kwaye ulusu luphethwe ngaphambili ngotywala
- Umsebenzi wokujoba i-hormone yokukhula ngaphantsi kwesikhumba ukuya kwinqanaba leoli (kungekhona imisipha)
Phawula! Ungasebenzisa nayiphi na indawo emzimbeni (inkunzi, umlenze, isisu okanye ihlombe)
- Ngokulandelayo, kufuneka ufake inaliti kwi-millimeter eyi-5 eninzi, unokuyenza kwinqanaba elifanelekileyo okanye umthambeko - njengokuba kusemfanekisweni
- Nceda ungakhathazeki, inaliti inqabile, ayilimazi nhlobo
- Emva koko cinezela iqhosha uze ubambe imizuzwana ye-5
Lu lungile! Kulula kakhulu ngoncedo lweenjini ze-hormone yokukhula, ufumana umntwana kwaye usempilweni imihla ngemihla
I-hormone yokukhula ye-Order ngoku nqakraza apha!
Thenga iHGH eMalaysia - ukuhanjiswa eBangkok
mbulela imfundiso ecacileyo
Mike Februwari 22, 2018